हाम्रो पक्षमा बोल्ने परमेश्वर : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
तपाईको जीवनमा एक्लो महसूस गर्नुभएको होला । कतिचोटी तपाईंले आफ्नो निम्ति बोल्ने, आफ्नो पक्षमा बोल्ने कोही पनि छैन भन्ने लाग्दछ । हामी हाम्रो आवाज सुन्ने हामीलाई मद्धत गर्ने कोही छैन भन्ने जस्तो कतिचोटी महसूस हुने गर्दछ । तर हाम्रो पक्षमा भएर परमेश्वर बोल्नु हुन्छ । परमेश्वर आवाजविहीनहरुको आवाज हुनुहुन्छ ।
“हे मेरा साना बालकहरु तिमीहरु पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरुलाई लेखीरहेछु । तर कुनै मानिसले पाप गरयो भने पनि त्यसको पक्षमा बोलीदिनुहुने एक जना हुनुहुन्छ अर्थात धार्मिक येशू ख्रीष्ट ।” १ यूहन्ना २:१ ।
यस १ यूहन्नाको पुस्तक लेख्ने यूहन्ना येशूका बाह्र चेलाहरुमध्ये एक थिए । जो प्रेरित भनेर पनि भनिएको छ । यूहन्नालाई येशूले प्रेम गर्नुहने चेला भनेर चिनिएका थिए । वास्तवमा यस पत्र विभिन्न मण्डलीहरुलाई लक्षित गरेर लेखिएको पत्र थियो । येशूका चेला यूहन्नाले सुसमाचार यूहन्ना, १, २ र ३ यूहन्नाका पत्रहरु र प्रकाशको पुस्तक लेखेका थिए । मूलत हरेक प्रभुका जनहरु विश्वासमा बलिया होउन् भनेर चाहन्थे । उनले विभिन्न चुनौतीहरुमाथि कसरी विजयी बन्ने, झूटा शिक्षाहरुबाट अलग रहनु पर्ने अनि परमेश्वरको प्रेमको गहिराईमा डुब्ने जस्ता कुराहरुमा जोड दिएका थिए ।
यहाँ यूहन्नाले बताएका छन् कि हे मेरा साना बालकहरु तिमीहरु पाप नगर भनेर लेखीरहेछु । निश्चय पनि यूहन्नाले भनेका थिए कि कुनै मानिसले आफ्ना पाप स्वीकार गरेको खण्डमा परमेश्वरले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुन्छ । यस्तो भनाईको कारण कसै कसैले यही बिचार गरीरहेका थिए कि पाप गर्नु त्यति ठूला कुरा होईन । लौ पाप गरौं फिक्री नगरौं परमेश्वरले हामीलाई तुरुन्तै माफ दिनुहुन्छ भन्ने भूल बिचार गरीरहेका थिए । तर यहाँ पाप गर्नु हुँदैन भनेर यूहन्नाले भनीरहेका थिए ।
वास्तवमा पापचाहिं परमेश्वरको विरुद्धमा गरिने जुनसुकै कुरा पाप हो । पापचाहिं एउटा गम्भीर कुरो हो । यहाँ यूहन्नाले अबदेखि तिमीहरुले पाप नगर भनेर म लेखीरहेछु भनेर भनीरहेका छन् । वास्तवमा पाचाहिं के ? यो कसरी गरिन्छ? भन्ने कुरा जब हामी जान्ने प्रयत्न गर्दर्छौं भने १ यूहन्ना ३:४ मा भन्दछ कि “पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ । पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो ।” अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा पापचाहिं परमेश्वरको आज्ञा र वचन अनुसार आफूलाई समर्पित नगर्नु हो ।
पाप एउटा गम्भीर विषय हो । पापले जहिले पनि मानिसलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्दछ । पापले जहिले पनि मानिसको जीवनमा दोषीपना ल्याउँदछ । पापले तपाईंको जीवनमा बन्धनमा ल्याउँदछ । पापले तपाईंको जीवनमा समस्या ल्याउँदछ । पापले तपाईंको जीवनमा शैतानले काम गर्ने मौका पाउँदछ् । यूहन्नाले प्रष्ट भनेका छन्, “जसले पाप गर्छ त्यो शैतानको हो । किनकि शैतान त शुरु देखि नै पाप गर्दै आएको छ । शैतानको कामहरु नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनु भएको हो ।” १ यूहन्ना ३:८ । निश्चय पनि पापले मानिसलाई शैतानको कमारो बनाउँदछ । यस्ता शैतानको कामहरु नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको हो । उहाँ मानव बनेर यस संसारमा आई क्रुसमा वलिदान हुनु भएको हो ।
शायद कति मानिसहरु पाप गर्दछन् । कति मानिसहरु कमजोरी हुँदछन् । कति मानिसहरु दुर्वल हुँदछन् । जानी जानी पाप गर्नुचाहिं अनुचित कुरा हो । हामीले पाप नगरौं भनेर यूहन्ना भन्दछन् ।
येशू हाम्रो पक्षमा भएर बोल्नु हुन्छ । निश्चय पनि येशू हाम्रो पक्षमा वकालत गर्नु हुन्छ । शायद हामीलाई लाग्न सक्छ कि हाम्रो निम्ति बोल्ने कोही छैन । हाम्रो पक्षमा आवाज उठाउने कोही छैन । हामी यो संसारमा एक्लो मानिसहरु हौं । जसको आवाज उठाउने कोही छैन भन्ने लाग्दछ । तर येशू आवाजविहीनहरुको आवाज हुनुहुन्छ । उहाँ जहिल्यै पनि उहाँको जनहरुको पक्षमा भएर बोल्नुहुन्छ ।
“जो ख्रीष्टमा पूरा गर्नुभयो, जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरुबाट जीवित पार्नुभयो, अनि स्वर्गीय स्थानहरुमा आफ्नै दाहिने वाहुली पट्टी बसाल्नु भयो । सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होईन, तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँले राख्नुभयो ।” एफिसी १:२०–२१ । यहाँ हामी जान्दछौं कि येशू ख्रीष्टमा मानिसको निम्ति उद्धारको योजना पूरा गर्नुभयो । ख्रीष्ट कलबरी क्रुसमा मर्नुभयो । ख्रीष्ट चिहानमा गाडिनुभयो । अनि उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो । अनि उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभयो । अहिले उहाँ परमेश्वरको दाहिने वाहुली पट्टी हुनुहुन्छ । उहाँलाई अधिकार अनि राज्य र शक्ति दिईयो । पिताको दाहिने हातपट्टी बसेर उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँ अहिले हाम्रो निम्ति अन्र्तविन्ती गर्नुभएको छ । उहाँ हाम्रो पक्षमा भएर बोल्नु हुन्छ । यूहन्नाले भनेका छन् कि उहाँले हाम्रो पक्षमा भएर बोल्ने एकजना व्यक्ति छन् जोचाहिं धार्मिक ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर जोड दिएका छन् ।
परमेश्वर हाम्रो पक्षमा बोल्ने एक वकील हुनुहुन्छ । हाम्रो पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । हाम्रो पक्षमा आवाज उठाउने हाम्रो असल कुराको लागि उहाँ हाम्रो पक्षमा बोल्नुहुन्छ । शायद कहिले कहिं हाम्रो जीवनमा निराशाको अवस्था पनि आउन सक्छन् । जीवनमा विभिन्न प्रश्नं.हरु पनि उठ्न सक्दछन् । तर हामी निराशा हुनु पर्दैन । प्रार्थनामा हामी लागीरहनु पर्दछ । परमेश्वरमा हाम्रो विश्वास र भरोसा बलियो बनाईराख्नु पर्दछ । अययूबले यसरी भनेका छन्, “किनभने अहिले मेरो गवाही ता स्र्वगमा हुनुहुन्छ, मेरा निम्ति जवाफ दिनलाई उच्चमा एउटा वकील तयारी हुनुहुन्छ ।” अययूबले जीवनमा भोगेका दुःख कष्टहरुमाझ उनले गरेका अनुभवका कुराहरु यस पदमा बोलीरहेका छन् । उनका जीवनमा थुप्रै प्रकारका मानिसहरुले विभिन्न प्रकारका बिचार र दोषारोपणको कुराहरु ल्याए । कठिन समयहरुमा पनि अययूबले यही कुराको अनुभव गरे । उनको गवाही उनको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति स्वर्गमा भएको कुरा बताउँदछन् । उनको पक्षमा जवाफ दिनलाई उच्चमा एउटा वकील भएको कुरा बताउँदछन् । आज हाम्रो निम्ति गावही दिने स्वर्गमा हुनुहुन्छ । उहाँ पिताको दाहिने वाहुलीपट्टी बस्नुभएको छ । उहाँ उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ । उहाँले तपाईंको पक्षमा भएर बोल्नुहुन्छ । वस्तावमा परमेश्वर हाम्रो लगि बोल्नुहुन्छ । उहाँ हाम्रो लागि बोल्नुहुन्छ । उहाँ हामीद्धारा पनि बोल्नुहुन्छ ।
हुन सक्दछ, तपाईंलाई विभिन्न समस्याहरु अनि कठिनाईहरुले भन्दछन् तिम्रो कोही छैन । तिमी केही गर्न सक्दैनौं । हुन सकदछ तिमी पापी छौं । तिमी दोषी छौं । तिमीले केही गर्न सक्दैनौं । तिमी लचार बनेर मात्रै बस्ने हो । तिम्रो जीवन यति नै हो । सकियो अब । यस्ता अनेकखाले नकारात्मक र निराशाजनक कुराहरुले तपाईंको जीवनमा आक्रमण गरीरहेका हुन सक्दछन् । तर यो कुरा याद गरौं कि हाम्रो पक्षमा भएर बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ । उहाँ उच्चमा हुनुहुन्छ ।
कति मानिसले तपाईको विरुद्धमा बोल्दछन् । तपाईंकै अगाडि पनि तपाईको विरोध नराम्रा कुराहरु बोल्दछन् । तपाईंका पीठ पछाडि पनि कति कुरा काटछन् । त्यो फलना यस्तो भनेर तपाईंको विरुद्धमा कुरा गर्ने मानिसहरु यस संसारमा कति छन् कति । तपाईंको खराब चिताउने र कुभलो चिताउने मानिसहरु पनि प्रशस्तै हुन्छन् । यस्तो पनि जमातहरु कति विश्वासीहरुमाझ हुँदछन् । तर एक जना व्यक्ति जो तपाईंको पक्षमा भएर बोल्नुहुन्छ । उहाँले तपाईंको पक्षमा असल कुराहरु बोल्नुहुन्छ ।
के आज तपाईं विभिन्न पापले ग्रसित हुनुहुन्छ? परमेश्वरको व्यवस्थाअनुसार जिउन सक्नु भएको छैन? जसले पाप गर्छ त्यो दियावलसबाटको हो । त्यो दियावलसको कमारो बन्दछ । त्यो दियावलसको काम र पाप नष्ट गर्नलाई परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको हो । आज तपाई पापको बन्धनबाट मुक्त हुनुहोस् । पापको दासत्वबाट छुटकार हुनुहोस् ।
येशू हाम्रो पक्षमा भएर बोल्नु हुन्छ । उहाँ परमेश्वरको दाहिने वाहुली पट्टी हुनुहुन्छ । उहाँ तपाईं र मेरो पक्षमा भएर वकालत गर्नुहुन्छ । उहाँ तपाईं मेरो आवाज हुनुहुन्छ । आफूलाई एक्लो अनि निराशामा नराख्नुहोस् । कतिचोटी जीवनमा विभिन्न कठिनाई कष्टहरुमा हामीलाई लाग्न सक्छ कि हाम्रो पक्षमा बोल्ने कोही छैन । तर हाम्रो पक्षमा बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ । उहाँ महान हुनुहुन्छ । उहाँ अचम्मको हुनुहुन्छ । उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ । हामीले हाम्रो आत्मिक आँखाहरु उठाएर हेरौं । परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा देख्न सकौं ।
« के तपाई साना हिमालहरु चढ्नु भएको छ?
वृद्धि र परिवर्तन: प्राणको उद्धार »
Vacancy at Leadership Tra... 395 views | by NC Reporter | posted on August 14, 2018